သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသူမို့
ရှားအိမ်တစ်ယောက် သူငယ်ချင်း ၀ါရ ရဲ့ အိမ်ရှေ့ခန်းက ဆိုဖာပေါ်မှာ ကျောမှီပြီး တီဗွီမှန်သားပြင်ကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ တီဗွီမှန်သားပြင်ပေါ်မှာ မိန်းမများကို ပြစားပြီး နာမည်ရလာသော “deal or no deal” အစီအစဉ်ထဲက အတိုများအဟိုက်များကို ကြည့်နေစဉ် အိမ်ရှေ့ခန်းက ဖုန်းက ဆယ်မိနစ်တစ်ခါလောက် မြည်နေသည်။
"ငါ့ဖုန်းတွေ မဟုတ်ဘူး ရှားအိမ်၊ ငါ့အခန်းဖော် ၀ါသီရ ရဲ့ ဖုန်းတွေ"
"အင်း… အွန်လိုင်း၊ အွန်လိုင်း" ၀ါရက ရယ်ကျဲကျဲနှင့်ပြောသည်။
"သူ့သမီးက တက္ကသိုလ်တောင်ရောက်နေပြီမဟုတ်လား၊ မိန်းမကော"
"ကွဲနေတယ်လေကွာ… တရားဝင်ကွဲတာတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ မင်းလဲ လုပ်ကြည့်ပါလား၊ အွန်လိုင်းမှာ ပေါတယ်၊ ငါတောင် ဂျာမဏီမှာကျောင်းတက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ အဆင်ပြေနေတယ်"
၀ါရ က ဆေးလိပ်ငွေ့များ တဖွားဖွားကို လက်နှင့်ယပ်ခတ်ပြီး ပြာခွက်ထဲသို့ ထိုးထည့်လိုက်သည်။
"မင်းအိမ်ရှင်က အိမ်ထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ပေးလား" ရှားအိမ်မေးလိုက်သည်။
"ဒီလိုပေါ့ကွာ… ဒါနဲ့ မင်းတော့ ရန်ကုန်မှာ သင်္ကြန်ကျမယ်ဆိုတော့ အဆင်ပြေနေတာပေါ့"
"မင်း စလုံးမှာ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ"
"သုံးရက်လောက်ပါပဲ။ အမ နဲ့တွေ့ချင်တာလည်းပါတယ်"
အိမ်ရှေ့ခန်း တံခါးက ပွင့်လာသည်။ ၀ါရ သူငယ်ချင်း ၀ါသီရ ကျောပိုးအိတ်ကိုလွယ်ပြီး ၀င်လာသည်။
"အေး.. ဒီနေ့ အလုပ်အိုဗာတိုင်မို့ နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်"
"ဒါ.. ရှားအိမ်.. မင်း စလုံးကို လူကြုံပို့ချင်တယ်ဆို…"
"ဟုတ်ကဲ့ ကိုရှားအိမ် တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ကျေးဇူးပဲဗျာ၊ ကျနော့ ညီမ၀မ်းကွဲကို လက်ဆောင်လေးပေးလိုက်ချင်လို့"
၀ါသီရ အခန်းထဲကို ၀င်သွားသည်။ ဖုန်းမြည်သံက ပေါ်လာပြန်သည်။ ၀ါသီရ အခန်းပြင် ပြန်ထွက်လာပြီး ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်သည်။
"ဟလို.. အင်း.. ကို ဒီနေ့ နဲနဲနောက်ကျသွားလို့"
"ခုမှ အလုပ်က ပြန်လာတာ ချစ်ရဲ့"
ဖုန်းကို အသံအုပ်ပြောရင်း အခန်းထဲကို ၀ါသီရ ၀င်သွားသည်။ နာရီဝက်ခန့်ကြာတော့ အခန်းထဲက အထုပ်နှစ်ထုပ်နှင့်ထွက်လာသည်။
"ညီလေး ကျေးဇူးပဲ.. ဒါက စင်္ကာပူက “နုသီ” အတွက်၊ ဖုန်းနံပါတ် ဒီအထုပ် ပေါ်မှာရေးထားတယ်။ ဒါကတော့ ကမာရွတ်က “နုရီ”၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို အထုပ်တွေပေါ်မှာ ရေးထားပေးတယ်"
ရှားအိမ် အထုပ်များကို လှမ်းယူလိုက်သည်။
ဆိုင်လေးထဲမှာ လူရှင်းနေသည်။ အပြင်မှာ စင်္ကာပူမိုးက ဖွဲဖွဲလေးရွာနေသည်။ ရှားအိမ် ရှေ့စားပွဲပေါ်က ခေါက်ဆွဲပြုတ်ခွက်က အငွေ့တထောင်းထောင်းထနေသည်။ စားပွဲနားမှာ လူရိပ်ကြောင့် မော့ကြည့်လိုက်တော့ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
သူမတို့ ရှားအိမ်ဘေးက ခုံများမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်သည်။
"တစ်ခုခုစားပါလား၊ ကျနော်ကျွေးပါ့မယ်... ဒါနဲ့ကိုဝါသီရ ရဲ့ ညီမက..."
"ကျမမဟုတ်ဘူး။ သူ.. သူ.." မျက်လုံးပြူးမလေးက ရယ်ကျဲကျဲနှင့် ဆံတိုမလေးကို လက်ညှိုးထိုးပြသည်။
ကိုဝါသီရ ညီမက သူ့အစ်ကိုနဲ့ နည်းနည်းမှ မတူဟု ရှားအိမ်တစ်ယောက် စိတ်ထဲက ကောက်ချက်ချမိသည်။
"အော်.. တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်၊ နှစ်ယောက်လုံးကိုပေါ့"
"ကိုဝါသီရနဲ့ အကိုနဲ့က ခင်တာကြာပြီလားဟင်" ဆံတိုမလေးက ဆံပင်လေးကိုခါပြီး ရှားအိမ်ကိုမေးသည်။
"သူနဲ့တော့ သိပ်မသိဘူးခင်ဗျ၊ သူ့နဲ့တူတူနေတဲ့ ၀ါရ နဲ့ သူငယ်ချင်းပါ"
"ကိုဝါသီရက စလုံးကို လာမယ်ပြောသေးလား"
"အဲဒါတော့မသိဘူး၊ သူ.. ညီမဆီ မရောက်တာကြာပြီထင်တယ်"
"ရှင်.. အဲ.. ညီမဆီ တစ်ခေါက်မှကို မလာသေးတာ၊ ညီမက တွေ့ချင်နေပြီလေ၊ သူက အလုပ်ခွင့်မရသေးဘူးဆိုလို့"
"ဟိုတစ်ခါ သူ့မိဘတွေ လာလည်သေးတယ်ကြားတယ်၊ ညီမက ဘာလို့ လိုက်မလာတာလဲ"
"ရှင်... အကိုကလဲ ဟင်းဟင်း၊ ညီမတို့ နားမှ မဖောက်ရသေးတာ"
"ဗျာ.... အဲ... တောင်းပန်ပါတယ်.. ကျနော် သူ့ညီမနဲ့ မှားသွားလို့"
အပြင်မှာ ကျီးကန်းအော်သံများက ရှားအိမ်ရဲ့နားထဲမှာ သာယာနာပျော်ဖွယ်။ ခြေထောက်များအောက်က အေးမြသော ကျောက်သားပြင်ရဲ့ အထိအတွေ့ကို ခံစားရင်း “နုရီ” လူကြုံပစ္စည်းလာယူမည်ဆို၍ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ မကြားရတာကြာပြီဖြစ်သော တွံတေးသိန်းတန်၏ သီချင်းကို နားထောင်ရင်း စောင့်နေသည်။
လူခေါ်ခေါင်းလောင်းသံတစ်ချက်ကြားလိုက်သည်။ အိမ်ရှေ့တခါးကို ထဖွင့်တော့ အိမ်ပေါက်ဝမှာ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ရပ်နေသည်။
အအေးခွက်လေးထဲက ပိုက်ကလေးများ လှုပ်ခတ်နေသလို အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ စကားသံများကလည်း ဝေ့၀ဲနေသည်။
နုရီက ၀ါသီရအကြောင်း၊ ကနေဒါအကြောင်း မေးမြန်းသည်ကို ရှားအိမ် စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြေပေးနေသည်။ နုရီ၏ မေးခွန်းတွေက ရှားအိမ်၏ စိတ်ထဲမှာ အတွေးများစွာကို ဖြစ်ထွန်းစေသည်။ သို့ပေမယ့် နုရီကို ပြန်လည်မေးလိုသော မေးခွန်းများကို မမေးတော့ဟု ရှားအိမ် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သေချာတာကတော့ နုရီ လည်း ၀ါသီရ နှင့် ရုပ်ရည်ချင်းမဆင်။
၀ါသီရ ပေးလိုက်သော အထုပ်လေးကို ပိုက်ပြီး နုရီတို့ ပြန်ဖို့ပြင်ကြသည်။ ရှားအိမ် တခါးဝထိ လိုက်ပို့ပေးအပြီး နုရီ သူငယ်ချင်း ရှေ့ကသွားနှင့်သည်ကို အခွင့်ကောင်းယူကာ ရှားအိမ်ကို မျက်နှာငယ်လေးနှင့် နုရီမော့ကြည့်လာသည်။
“အကို.. ကိုဝါသီရ က ဘာလို့မြန်မာပြည်ကို ပြန်မလာတာလဲ”
“အလုပ်ခွင့်မရလို့ထင်တယ်။ ကျနော်လဲ တိတိကျကျတော့ မသိဘူးဗျ”
“ကျမတို့ရင်းနှီးနေတာ ၂နှစ်လောက်တောင်ရှိတော့မယ်၊ တခါမှ မတွေ့ရသေးဘူး။ သူ ဒီတစ်ခါလာရင် ကျမကို သူ့မိဘတွေနဲ့ တွေ့ပေးမယ်လို့ ပြောတာပဲအကိုရယ်"
ရှားအိမ် ဆံပင်ကိုသပ်ကာ နှုတ်ဆိတ်နေလိုက်မိသည်။
ရှားအိမ်ဘာမှ ပြန်မပြောတော့ မရဲတရဲအပြုံးလေးပြုံးကာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သွားလိုက်ပါဦးမယ်ဟု နှုတ်ဆက်ကာ နုရီ ခြံထဲမှ ထွက်သွားလေတော့သည်။
အိမ်ရှေ့ဆိုဖာပေါ်မှာ အရုပ်ကြိုးပြတ်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ကက်ဆက်ရီမုတ်ကိုယူကာ သီချင်းကို အကျယ်ကြီးဖွင့်လိုက်သည်။ ရှားအိမ် တစ်ယောက် သူ၏ဆံပင်များကို တဗြန်းဗြန်းမြည်အောင် ကုတ်လိုက်ရင်း တစ်ယောက်တည်း အကျယ်ကြီးအော်ပစ်လိုက်တော့သည်။
“ရှားအိမ်ရေ.. မင်း ခေတ်နောက်ကျနေပြီကွ၊ သိပ်ကို ခေတ်နောက်ကျနေပြီ… ဟူးးး”
ခေတ်ကိုခံစားနားလည်ရင်း.. တစ်ဘက်မှလည်းစေတနာများစွာဖြင့် ...
Comment by Phyo Evergreen — April 3, 2009 @ 11:58 pm |
Comment by ဒေါင်းမင်း — April 4, 2009 @ 12:04 am
Comment by sin dan lar — April 4, 2009 @ 1:12 am
အမရေ.. ခေတ်နောက်ကျတာပဲ ကောင်းမလား..။ တော်ကြာ ခေတ်ရှေ့ လွန်နေလို့ဟထိုးလဲ ချော်သွားမှဖြင့် ၂ ဘက်စလုံး မကောင်းဘူးနော်။ တဘက်က အတည်ဆိုရင်ပေါ့လေ… ။
Comment by နေညိုရင့် — April 4, 2009 @ 2:49 am
အစ်မရေ… ဖတ်အပြီးမှာ ရှားအိမ်လိုပဲ ဘာပြောရမှန်းမသိတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်သွားတယ်။ ညီမရဲ့ ရည်းစားများတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်လေးတစ်ယောက် သူ့ကောင်မလေးအတွက် ပေးလိုက်တဲ့ လက်ဆောင်ထုပ်လေး သယ်သွား ပေးဖူးတယ်။ ညီမက ကောင်လေးအကြောင်းကို သူမေးတာတွေ ပြောပြနေတုန်း နားထောင်ရင်းကြည့်နေတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကို ဘယ်လိုပြန်ရေးပြရမလဲ မသိဘူး။ ဘယ်တော့မှတော့ မမေ့တော့ဘူး…။ အစ်မ ၀တ္ထုကောင်းလေးအတွက် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
Comment by ရွှေပြည်သူ — April 4, 2009 @ 3:00 am
သိပ်မှန်တာပဲမမရယ် ကိုယ်ကပဲ ခေတ်နောက်ကျတာလား သူတို့ကပဲ ခေတ်ရှေ့ပြေးတာလား
Comment by မွန် — April 4, 2009 @ 6:43 am
ခေတ်ရဲ့ နောက်မှာပဲ နေခဲ့တော့မယ်။ ခေါင်းရှုပ်တယ်လေ။ :D
Comment by ပုံရိပ် — April 4, 2009 @ 8:32 am
I really like this post~~ I heard alot of same stories in sg too~~ huuu huuu
Comment by mee mee may — April 4, 2009 @ 9:06 am
အွန်လိုင်းမှာ အဲဒီလိုယောက်ျားတွေ ဘယ်လောက်များနေမလဲ မသိဘူးနော်။
အွန်လိုင်းဆိုတာ တကယ့်ဘ၀ အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး အမျိုးမျိုး လိမ်ညာကြပေမဲ့ ကြာတော့လည်း ဇာတိတွေက ပေါ်တာပါပဲ။
အဖြစ်မှန်ဆိုတာ ကြာကြာဖုံးထားလို့ ရတာမှ မဟုတ်တာလေ။
“ခေတ်နောက်ကျတယ်” လို့ ရှားအိမ်က စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ပြောလိုက်တာနေမှာ … တကယ်က သစ္စာမရှိတာပဲ … မဟုတ်လား။
Comment by မေဓာဝီ — April 4, 2009 @ 10:51 am
နောက်မှာဘဲကောင်းတယ် အဖွားရေ၊ ရှေ့ရောက်ရင် စိတ်မောလို့၊အော်လိုက်ချင်တာက ရှားအိမ်ရေ မင်းခေတ်နောက်ကျတာဘဲကောင်းတယ်…. ငါလည်း အဖော်ရတယ်… လို့ပေါ့ဗျာ
Comment by ဒေါင်းသျေောင်းမှာပျော်သည့်ကျား — April 4, 2009 @ 12:52 pm
Comment by ဒေါင်းသေချောင်းမှာပျော်သည့်ကျား — April 4, 2009 @ 12:54 pm
အပြင်မှာ တကယ် ဒီလိုလူတွေရှိနေတာ အများကြီးပဲ၊ ရှားအိမ်ရေ.။
ဘ၀ဆိုတာကို အဲဒီလိုကျော်ဖြတ်ချင်ကြတဲ့ လူတွေနော်။
အချိန်နဲ့လူ့တန်ဖိုးဆိုတာကို သူတို့မေ့လျော့နေကြတာ ထင်တယ်။
Comment by အပြုံးပန်း — April 4, 2009 @ 7:40 pm
Phyo Evergreen… အမလဲ ကွန့်မင့်ရေးလို့ရသွားလို့ ပျော်တယ်း)
ဒေါင်းမင်း .. အခုဘယ်ရောက်နေလဲ၊ မောင်လေးလဲ နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေ
sin dan lar … ကျမလဲ အဲလိုပဲထင်ပါတယ် မစန္ဒာလင်းရယ်..
နေညိုရင့်… ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် အတည်ဘက်က နာတာပေါ့လေ..
ရွှေပြည်သူ … အမတော့ မနေနိုင်တော့လို့ ရေးမိတာပါ။ ခုနကပြောသလို နှစ်ဘက်လုံးက အပျော်ဆိုရင်တော့ ပြီးတာပါပဲ။ တဘက်က စီးရီးယစ်ဖြစ်နေရင်တော့…
မွန် … အမတို့ နောက်ကျနေတာပဲဖြစ်မှာပါမွန်ရယ်။
ပုံရိပ်… နေခဲ့တော့ပုံရိပ်ရေ… တူတူနေခဲ့မယ်
mee mee may … ကမ္ဘာအနှံ့ကိုဖြစ်နေတယ်နဲ့တူပါတယ် မီးမီးမေရယ်..
မေဓာဝီ .. မမေရေ.. စေ့စပ်ထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ယုတ်စွအဆုံးလက်ထပ်ထားတာတောင် တကယ်ချစ်မိကြတယ်ဆိုလဲ ပြတ်ပြတ်သားသားကွဲပြီးအတည်ယူကြ၊ အဲလိုမျိုး မိန်းမတွေရဲ့ နှလုံးသားကို အွန်လိုင်းပေါ်က အပျော်ကစားပြီးတော့ respect မရှိတာကို မလေး မနေနိုင်လို့ ရေးလိုက်မိတာပါပဲ မမေရယ်..။
ဒေါင်းသေချောင်းမှာပျော်သည့်ကျား … အရေးထဲအဖော်ညှိနေရသေးတယ်နော်။ ခေတ်ရှေ့ပြေးချင်သေးလို့လား.. တိတ်ကဲမြေးရေ.. ဒီရက်တွေ အဖွားမအားသေးလို့၊ တိုင်ပင်စရာရှိတယ်ဆို အီးမေးလ်သာပို့ထား။
အပြုံးပန်း … “အချိန်နဲ့လူ့တန်ဖိုး” ဆိုတာကို အရမ်းကြိုက်သွားတယ်။ မလေးလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ရမယ်။
Comment by မလေး — April 4, 2009 @ 7:47 pm
အဲ့…အနော်ဘာမှ ပြောတော့ဘူး :P ခေတ်ဆန်မိလို့ မှောက်ခုံလဲကျသွားတာ သွားကျိုးသွားတယ် ။
Comment by မောင်မျိုး — April 4, 2009 @ 10:18 pm
ဟား ဟား ခေတ်မီတဲ့ ပိုစ့်လေး တစ်ခုပါပဲ မမရေ..
အဲလိုတွေ အတော်များလာနေပြီ အခု… ယောင်္ကျားတွေများ ခက်တယ်
မိန်းမတွေက ပိုခက်တယ် မမရေ
Comment by Pinkgold — April 4, 2009 @ 11:18 pm
Comment by kom — April 5, 2009 @ 1:45 am
အဲလိုသာဆိုရင် ကျွန်တော်တော့ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် ပြန်ရောက်နေပြီလားမသိ.
ဖတ်မိသူတွေလည်း ကိုယ်ချင်းစာပြီး တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး မလှည့်စားမိကြပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်ဗျာ.
ခေတ်ကြီးက သိပ်ကိုတိုးတက်နေလွန်းတော့လည်း ရေခြားမြေခြားဆိုတာ မရှိတော့ဘဲ အရမ်းကို နီးစပ်နေစေခဲ့တာကိုက ပြဿနာတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်လို ဖြစ်နေတယ်.
ခေတ်နောက်ကျစွာနဲ့ ဘာကိုမှမသိပြန်ရင်လည်း ဘုမသိဘမသိနဲ့ လှည့်စားခံရမယ်. ခေတ်နဲ့အညီပြေးလိုက်ပြန်ရင်လည်း ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲ ဖြစ်သွားမယ်.
အကောင်းဆုံးကတော့ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို အမှန်အတိုင်းနားလည်ပြီး အလိုဆန္ဒတွေကို ကောင်းစွာချုပ်တည်းထားနိုင်ခြင်းသာ မှန်ကန်သော နေထိုင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ် မလေးရေ…
ပြောနေရင်း ကျွန်တော်လည်း ဓမ္မဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလားမသိ..း)
စကားမစပ်. ဘန်နာပေါ်က ပိတောက်ပန်းလေးတွေကိုကြိုက်တယ်.
Comment by Yan — April 5, 2009 @ 7:45 pm
Pinkgold … ယောင်္ကျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် အတည်ခံစားရသူ နာတာပေါ့ ညီမရယ်..
kom .. ဟုတ်ကဲ့အမ.. လာလည်တာကျေးဇူးပါနော်
Yan … အဲလိုလုပ်သူတွေက တပြိုင်နက် တကယ်ကိုနှစ်ယောက်ချစ်မိတာပါ ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမတုန်းနော်… ဘန်နာပေါ်က ပိတောက်မဟုတ်ဘူး။ မလေးက လူ့ဂွစာ.. ပိတောက်ကို မကြိုက်ဘူး။ သူများတွေ စကားထဲထည့်မပြောတဲ့ ငုဝါလေးတွေကိုကြိုက်လို့ ငုပန်းလေးတွေတင်ထားတာပါရှင်..
Comment by မလေး — April 5, 2009 @ 11:24 pm
ဆော်ဒီအာရဗျမှာဆိုရင်တော့ အိုကီတယ်. တပြိုင်တည်း လေးယောက်တောင် ချစ်လို့ရတယ်. အဲလိုဆိုရင်တော့ ဘာသာပြောင်းရင်ပြောင်း. မပြောင်းရင်တော့ တစ်ခွန်းပဲ ပြောစရာရှိတော့တယ်. မြွေမဖမ်းနဲ့လို့… :)
တစ်ပြိုင်တည်းနှစ်ယောက်ချစ်မိရင် မြွေဖမ်းတာနဲ့အတူတူပဲ. တစ်ချို့ကျတော့လည်း မြွေဖမ်းတာတော်တယ်ဗျ. ကျွန်တော့်အသိတစ်ယောက်ကို မေးဖူးတယ်.
သူက လောလောဆယ် ယူအန်(န်)မှာ လုပ်နေတဲ့ အရာရှိတစ်ယောက်နော်.. သူက ဘာပြောလဲသိလား.
(၁) စံတော်ချိန်မတူစေနဲ့တဲ့. ဥပမာ နိုင်ငံမတူတာမျိုးပေါ့.
(၂) သူမှသူ ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်နေပေ့စေတဲ့. အမြဲတမ်း Available ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်အောင်လုပ်တဲ့.
(၃) မသိတဲ့ဝှက်ဖဲလေးတွေထားပြီး လိုသလို ကစားတဲ့… ဥပမာ. အစ်မတို့၊ ညီမ၀မ်းကွဲတို့ စသည်ဖြင့်ပေါ့တဲ့.
ကျွန်တော်တော့ သူပြောတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ပြီး တော်တော်လေး လန့်လည်းလန့်မိတယ်. ဖြုံလည်းဖြုံသွားတယ်.
အသေးစိတ်လည်း မပြောရဲဘူး. တော်ကြာ ကိုရန်က ဘာလို့အဲလောက်သိနေတာလဲဆိုပြီး မလေးက ပြန်မေးမှ ကွိုင်ပဲ… အဲဒိ့အခါကျရင် မြွေဖမ်းတာတင်မကဘူး. ငါးရှဉ့်ရော၊ ငါးမြွေထိုးရော၊ ငါးပြေမရော အကုန်ဖမ်းတာထက်ပိုဆိုးလိမ့်မယ်. ဟတ်ဟတ်ဟတ်. မျက်စိထဲတောင်မြင်ယောင်မိသေးတယ်. ရှလွတ်.. ရှလွတ်.. ရှလွတ်နဲ့ လက်ထဲက ပြေးထွက်နေမယ့် ငါးတွေငါးတွေ. :)
စကားမစပ်… ငုဝါပန်းနဲ့ ပ်ိတောက်ပန်း တော်တော်တူတယ်နော်. ကျွန်တော်ခုမှ ပြန်ကြည့်မိတယ်. ဟုတ်သားဗျ.
အင်း. မလေးရဲ့ အနှိမ်ခံလေးတွေကိုမှ မေတ္တာထားတတ်တဲ့ စေတနာလေးကို ကျွန်တော် လေးစားမိပါတယ်ဗျာ. I mean it…
ကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေ မလေးရေ. ဆီဘောက်စ်မရှိတော့ ကော်မန့်မှာပဲ လာပြီး ပွားနေရတော့တယ်. ခွင့်လွှတ်.
Comment by Yan — April 5, 2009 @ 11:40 pm
Comment by မေ့သမီး — April 6, 2009 @ 1:46 am
(၂၁ရာစုမှာ.. အစစ်အမှန်ခံစားခွင့်ရသော အတုအယောင် ပရိုဂရမ် များစွာ. ကွန်ပျူတာ မှ ဂျနရိတ် ထပ် လုပ်ပေး လိုက်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ..) အင်း… ခံစားရတဲ့သူက ပိုတန်မလားတောင် မသိဘူး.. ဘာမှ မခံစားရတဲ့သူက ဟန်ဆောင်နေရာတာနဲ့. အချိန်ကုန် လူပန်း ပေမဲ့.. တကယ် ခံစားရတဲ့သူကတော့ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ.. ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရ သွား တယ်လေ.. လွမ်းတယ် ဆိုတဲ့ အရသာကလည်း ခံစားလို့ အတော်ကောင်းဆိုပဲ.. :D .. ( ဂွ တွေးကြည့်တာပါ :P ) နေကောင်းရဲ့လား မအိမ့်.. မရောက်ဖြစ်တာတောင် ကြာပေါ့..
Comment by Tesla — April 6, 2009 @ 6:42 pm
Right ကိုတက်စ် မှန်တယ်.. ချစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရသွားတယ်။
မလေးရေ ဒီပိုစ့်လေးကို သမီး မေလ်းပို့လိုက်တယ်။။ ဖတ်စေချင်သူတွေဆီကို။ ခွင့်ပြုနော် မလေး :P
Comment by Pinkgold — April 6, 2009 @ 8:48 pm
Yan... ကိုရန် ခုလိုပြောပြတာ မလေး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီထက်အသေးစိတ်ပြောရင်လဲ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရိုးသားတဲ့မိန်းကလေး၊ယောင်္ကျားလေးတွေ နုနယ်သေးတဲ့ အွန်လိုင်းတက်ခါစ လူငယ်တွေ သတိထားမိရတာပေါ့။
Tesla… ကိုတက်စ်ပြောမှ အကောင်းဘက်ကလှည့်တွေးရင် ဟုတ်သလိုလိုရှိသား၊ လွမ်းတယ်ဆိုတဲ့အရသာက ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ ခုမှပဲကြားဖူးတော့၏။ ဟုတ်.. မလေး နေကောင်းပါတယ်။ ကိုတက်စ်လာကော.. စလုံးမှာပဲလား။ ကိုတက်စ်ဘလော့ဂ်တောင် မရောက်တာကြာပြီ။ စာမရေးသေးဘူးထင်လို့။
Pinkgold… ရတယ်ညီမလေး။ မလေးလဲ လူငယ်တွေကို သိပြီးသားဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်း သိစေချင်တဲ့ စေတနာပါ။
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 2:11 PM
On line… on line သမီးမိန်းခလေးမွေးထားတဲ့သူတွေဆို ပိုစိုးရိမ်စရာပေါ့အိမ့်ရေ…
ဒီပို့ စ်လေးကို မိန်းခလေးတော်တော်များများ ဖတ်မိကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်…
အွန်လိုင်းရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ ရအောင်လေ…
အိမ်ထောင်ရှိသူတွေ အွန်လိုင်းမှာ ဖောက်ပြန်တာက လက်တွေ့ မပါဘူးဆိုပေမယ့် အတော်အကျည်းတန်တဲ့ လုပ်ရပ်ပဲအိမ့်ရေ… ကာယကံပဲမပါတာ.. မနော၊ ၀ဇီကံတွေကတော့ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတာမိုလား… မထိမ်းနိုင်ရင် ကာယကံတွေပါ နောက်ဆက်တွဲပါလာနိုင်တာမို့အတော်ရင်လေးစရာပါ…
ဒီပို့ စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါအိမ့်ရေ….
ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသူတွေပဲ ရှိရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်..။ ခေတ်နောက်ပြန်ပဲ ဆွဲချင်တယ်..။